WhatsApp horay ayey kuu soo ogeysiisay fariimaha la aqriyey | Androidsis
WhatsApp horey ayey kuu soo ogeysiineysaa markii fariin uu aqriyay qofka qaata
Francisco Ruiz | | Codsiyada Android, Tababarada, Whatsapp
Inkasta oo aan wali sugeyno kuwii loo balan qaaday Wicitaanada codka WhatsApp, taas oo looga dhawaaqay MWC14 oo lagu qabtay magaalada Barcelona bilowga sanadkan oo ku dhow inuu dhammaado, aragti ahaanna waxay ahayd inay yimaadaan ka hor xagaaga. Maanta waxaan leenahay dhadhanka ku dhawaaq horumar kaas oo dalbanayay muddo dheer malaayiin isticmaaleyaal ah oo ka tirsan dalabka boqoradda fariin deg deg ah loogu dirayo aaladaha moobaylka.
Horumarintu maahan mid kale hada WhatsApp horeyba wuu kuu ogeysiinayaa markii fariin uu aqriyay qofka qaata. Horumar in, sida aan kuu sheego, uu ahaa mid ka mid ah dalabyada taariikhiga ah ee adeegsadayaasheeda ee ah in casriyeyntii ugu dambeysay ee rasmiga ah ee si toos ah looga heli karo Keydka Android Play, horay loo dhaqan geliyey.
Markii hore, hubinta laba-laabka ah ee ka muuqatay annaga farriimaha lagu diro WhatsApp Waxay ula jeedeen hubinta koowaad ee dirista farriinta ay sax ahayd, iyo hubinta labaad ee qofka qaata laftiisa uu horay u helay, taas oo tan dambe aysan uga jeedin inuu aqriyay.
Hada shaqadan cusub WhatsApp horey ayey kuu soo ogeysiineysaa markii fariin uu aqriyay qofka qaata hab sidan ah hubinta laba-laab ah ayaa isku beddelay buluug. Tani waxay si cad uga dhigan tahay in qofka qaata ee fariinta loo diray uu horey u helay una akhriyay. Hagaag, aqrintaas waa wax aad u badan in la dhaho, waxaan kaliya oo aan hubin karnaa in qofka qaata ee su'aasha uu soo galay barta WhatsApp iyo gaar ahaan xiriirka xiriiriyaha soo diray fariinta.
Haddii aad horey u cusbooneysiisay dalabkaaga Nooca WhatsApp 2.11.432 taas oo ah ta keenaysa fulintan cusub, laakiin barnaamijku wali ma calaamadeeyo fariimaha uu horey u aqriyay qaataha, ha quusan maadaama oo suurto gal tahay in xiriiriyahaaga WhatsApp uusan wali cusbooneysiinin arjiga noocaan cusub, tanina waa shuruud lagama maarmaan u ah labalaab ku hubinta buluuga ah ayaa kugu wargalin doonta fariimaha horey loo akhriyey.
Shaki kuma jiro in maqnaanshaha roodhida, keega fiican yihiin, sida maahmaahda Isbaanishka ahi ku maahmaahdo. Tan waxaan uga jeedaa, maqnaanshaha codadka la filayo ee ah inaan mar hore ku raaxeysanno iyaga dhowr bilood ama seddex ka hor, cidna kuma xanaaqdo macaan iyo shaqadan cusub. lagu hirgeliyey cusbooneysiintan rasmiga ah ee rasmiga ah ee WhatsApp, aad ayaa loo soo dhoweeyey aadna ugu anfacaa dhamaan taageerayaasha barnaamijka taas oo, maalinteedii isbedeshay oo kacdoon ku sameysay habka aan ula xiriirno jiilkeena ugu dambeeyay taleefannada gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Whatsapp » WhatsApp horey ayey kuu soo ogeysiineysaa markii fariin uu aqriyay qofka qaata
Saacado fiican, Telegram-ka tani waxay ahayd bilowgii.
Wax kasta oo lagu sheego shabakadaha bulshada ee farriinta lagu akhriyo WhatsApp
Motorola wuxuu soo bandhigayaa Moto Maxx, oo hadda ku sii haray Brazil